Ciidamo kawada tirsan Dowladda oo Muqdisho ku dagaalamay – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Ciidamo kawada tirsan Dowladda oo Muqdisho ku dagaalamay
Ciidamo kawada tirsan Dowladda Soomaaliya ayaa Barqanimadii maanta waxa ay ku dagaalameen Xaafada Xoosh ee katirsan Degmada Dharkenley ee Gobolka Banaadir.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii Ciidamo katirsan Milateriga Soomaaliya ay Weerareen Xarun ay Ciidamo kale oo Milateriga ah ay la yihiin Xaafada Xoosh ee katirsan Degmada Dharkenley, waxaana halkaasi ka dhacay daagaal dhowr daqiiqo socday sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka.
Inta la xaqiijiyay Dagaalka ayaa waxaa ku geeriyooday hal Askari halka tiro kale oo Askar ah ay ku dhaawacmeen.
Warar qaar ayaa sheegaya in Ciidamada soo wareeray goobta ay wateen labo Sarkaal oo katirsan Ciidanka Milateriga, oo ku sugna goobta la soo weeraray.
Faah faahin intaas ka sii badan lagama hayo dagaalka,walina ma jiro wax war ah oo ka soo baxay Laamaha Amniga ee Degmada Dharkenley iyo Maamulka Degmadaasi, kaas oo ay uga hadlayaan dagaalka khasaaraha geystay ee maanta ka dhacay degmada.
Previous articleCunista Iniinyaha Liin Macaantu Waxay Caawisaa Xakamaynta Dhiigkarka, Macaanka Iyo Xaalado Kale
Next articleGalmudug oo soo saartay War-saxaafadeed ka dhan ah DFS (Akhriso Sababata)
Beegsonews.com waa warbaahin madax baanaan oo ku soo baxda dalka, kaga bogo wararka Somaalida iyo aduunkaba Goorwalba iyo marwalba. oo aan kusoo qaadano wararka,caafimaadka,. NOOGU SOO GUDBI WIXII WARBIXIN AH, emailka: beeg[email protected] iyo facebook iyo twitter beegsonews. Wa bilaahi Tawafiiq
Dedeg:Qarax ka dhacey muqdisho
Gudoomiyaha Aqalka sare BFS oo Madaxda dalka Qadar kala hadlay arrimo...